🍒द्रुत भुक्तानी क्यासिनो - आधिकारिक साइट, दर्ता, भुक्तान प्रणाली
द्रुत भुक्तानी क्यासिनो अनलाइन
साइट ईन्टरफेस र कार्यक्षमता
खेल र प्रदायकहरू
पंजीकरण र प्रमाणिकरण
बोनस र पदोन्नतिहरू
फास्ट पे क्यासिनोको एक विशेषता नाम र वास्तविक कार्यहरू बीचको पत्राचार हो।"फास्ट ड्रिंक" - अंग्रेजीबाट अनुवाद गरिएको छिटो भुक्तानको अर्थ। अनलाइन जुवा सेवाका सिर्जनाकर्ताहरूको समूह अनलाइन क्यासिनोमा खेलाडीहरू धोका दिन इन्टरनेटमा पहिले नै परिचित योजनाहरूको कारण स्तब्ध थियो। यस समस्याको समाधान यसको आफ्नै ब्रेनचिल्डको निर्माण थियो, जसले कुनै पनि देश र नैतिकताको कानूनलाई उल्लंघन गर्दैन, फास्ट पे क्यासिनो।
ठगीको समस्या यस प्रकारको सेवाहरूमा केवल एक मात्र होइन। यसले खाता प्रमाणिकरणको बहु-दिन पुष्टिकरण, र भुक्तानीमा विशेष ढिलाइहरू, र क्यासिनोको नियम र शर्तहरूमा"जालहरू" समावेश गर्दछ। द्रुत भुक्तानी क्यासिनो स्थिर जीत र छिटो भुक्तानको साथ इमानदार प्लेयरलाई खुशी बनाउनको लागि सिर्जना गरिएको थियो!
क्यासिनोसँग आधिकारिक गेमिंग इजाजत पत्र दमा एन.वी. पंजीकरण नम्बर १2२१55 को साथ। यससँग यसको पनि राउन्ड-द-घडी टेक्निकल समर्थन छ। समर्थनलाई सम्पर्क गर्न, एक टेलिग्राम च्यानल, प्रतिक्रिया फारम, एक ई-मेल र पंजीकृत प्रयोगकर्ताहरूको लागि द्रुत सम्पर्क बटन प्रदान गरिएको छ।
क्यासिनो दुनिया भर मा अधिक र अधिक नयाँ खिलाडीहरु लाई आकर्षित गर्दै छ। यो २०१ since देखि सक्रिय छ र यस समयमा एक शानदार प्रतिष्ठा कमाएको छ। FPC अनलाइन जुवा को ब्रान्ड सुधार गर्न सम्पूर्ण विश्व मा एक नाम कमाईरहेको छ। क्यासिनो वेबसाइट १ languages ​​भाषाहरूमा उपलब्ध छ, जर्मन, रूसी, अंग्रेजी, यूक्रेनी, कजाख, पोलिस, चेक र अन्य लगायत।
तपाईं लिंक द्वारा साइटमा जान सक्नुहुन्छ।
फास्ट प्ले क्यासिनोको आधिकारिक वेबसाइट केवल कम्प्युटर र ल्यापटपको लागि मात्र होईन, तर विभिन्न मोबाइल उपकरणहरूका लागि पनि - ट्याब्लेटबाट स्मार्टफोनमा। रंग योजना"चिकनी" छ र आँखा तनाव गर्दैन, गाढा रमणीय टोन हावी।
सुविधाको लागि, शीर्षमा"कम्पनीको बारेमा","समर्थन","भुक्तानी","प्रोमो","प्रतियोगिता" र"लगइन वा रेजिष्ट्रेसन" जस्ता सेक्सनहरूमा द्रुत पहुँचको लागि"हेडर" छ। यसको तल सीधै नयाँ बोनस, वफादारी कार्यक्रमहरू, पदोन्नतीहरू र साप्ताहिक टूर्नामेन्टहरू जसमा फ्लिप हुन्छन् भन्ने आधारभूत जानकारीको साथ एक ब्लक छ।
मुनि खेलको आधारभूत जानकारी तल छ। यसमा, तपाईं केहि प्रदायकहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, आफूले चाहेको खेल फेला पार्न सक्नुहुनेछ वा अनलाइन क्यासिनोमा प्रस्तुत गरिएको क्याटलगलाई मात्र हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ध्यान दिनुहोस् कि खेल प्रदायकहरूको चयन selection० आईटम भन्दा बढी छ। फास्ट पे क्यासिनो वेबसाइटमा सयौं खेलहरू छन्।
साइटको तलमा खेलहरूमा नवीनतम विजेताहरू, साथै सम्पूर्ण क्यासिनो अस्तित्वको शीर्ष विजेताहरू छन्। थप रूपमा, वेबसाइटको यस अंशले साप्ताहिक प्रतियोगिताहरू समावेश गर्दछ जुन तपाईं केही सर्तहरूको अधीनमा दिन सक्नुहुन्छ।
र अन्तको अन्तमा दर्ता फारम हो, जसमा मानक आईटमहरू समावेश छन्:
मुद्रा चयन (USD, EUR, NOK, CAD, AUD, NZD, PLN, ZAR, JPY, BTC, ETH, BCH, LTC, DOG, USDT);
नियम र सर्तहरूको अनिवार्य पढाइ, गोपनीयता नीति।
फास्ट पे क्यासिनो लाइब्रेरीमा प्रदायकहरूको संख्या र उनीहरूको खेल प्रस्तावहरू समावेश छन्: एमाटिक, बीटीजी, बी गेमिंग, Booming, EGT, ELK, EvoPlay, बेलत्रा, खाका, Endorphina, Fantasma, Fugaso, Old Skool, All41 स्टूडियो, प्लायसन , रब्याक र अन्य प्रदायकहरू।
प्रस्तुत खेलको सिंहको अंश स्लट मेसिनहरू हुन्। क्यासिनोमा मिति सकिएको कुनै खेल छैन। सूची नियमित रूपमा अपडेट र अद्यावधिक हुन्छ। सबै अनलाइन क्यासिनो जुवा डिलरहरूले आधुनिक थ्रीडी एनिमेसन, गैर-मानक इनाम राउन्ड, विस्तारकर्ता र अन्य सुविधाहरूको साथ सेवाहरू प्रदान गर्दछ।
फास्ट पे क्यासिनोले स्लट मेसिनहरूमा मात्र ध्यान दिँदैन, तर विभिन्न जुवा आन्दोलनहरूको साथ यसको लाइनलाई पनि पूरक बनाउँछ। उदाहरण को लागी, रौलेट, ब्ल्याकजेक र ब्याक्र्याट को सबै प्रकार संग श्रेणिहरु छन्। खेलको फर्म र सीमा पनि तालिकामा फरक पर्दछ।
फास्ट पे क्यासिनोमा खाता खोल्न बिल्कुल सजिलो छ। यो गर्नका लागि तपाईले साइटको"हेडर" मा रेजिष्ट्रेसन बटनमा क्लिक गर्नुपर्दछ वा तल दर्ता फारममा जानुपर्नेछ।
फास्टपेस क्यासिनोमा दर्ता सुरु गर्नुहोस्
रेजिष्ट्रेसन एकदम सरल छ र ईन्टरनेटको लागि मानक आईटमहरू समावेश गर्दछ: ईमेल, पासवर्ड, मुख्य मुद्रा प्रयोग भएको र फोन नम्बर। यो आवश्यक छ कि तपाईं नियम र सर्तहरू, गोपनीयता नीतिसँग आफ्नो परिचित हुनुहोस् र फारममा"रेजिस्टर" बटन क्लिक गर्नु अघि उपयुक्त बक्स जाँच गर्नुहोस्।
लिंक तपाईंको खेल खाता सक्रिय गर्नका लागि निर्दिष्ट ईमेल ठेगानामा पठाइनेछ। तपाईंले चिठीमा लिंक पछ्याउनु पर्छ र क्यासिनो वेबसाइटमा लग इन गर्नुहोस्। यो"प्रोफाइल डेटा" सेक्सनमा तपाईको व्यक्तिगत डेटा भर्न तुरन्त सिफारिस गरिन्छ। तपाईंले पहिलो र अन्तिम नाम, जन्म मिति, लि gender्ग, देश, शहर, ठेगाना र हुलाकी कोड संकेत गर्न आवश्यक छ। यो महत्वपूर्ण छ कि द्वन्द्व र अप्रिय परिस्थितिबाट बच्नको लागि सच्चा डेटा भर्नु पर्छ। सेवाको प्रशासनले कुनै पनि समयमा सँधै डेटाको लागि जाँच गर्न सक्दछ।
भविष्यमा तपाईले प्रमाणिकरण प्रक्रियाबाट पार गर्नु पर्ने हुन्छ। यो व्यक्तिगत आधारमा गरिन्छ। उदाहरणको लागि, एक खेलाडी खराब खेल वा बहु-लेखा, जुवा शैली वा आईपी ठेगाना लगातार परिवर्तन भइरहेको शंका छ। प्रमाणिकरण प्रक्रिया कागजातहरूको उच्च-गुणको फोटो अपलोड गर्नमा शामिल छ: एक राष्ट्रिय पासपोर्ट वा आईडी-कार्ड, दर्ताका लागि अन्तिम उपयोगिता बिल र भुक्तान प्रणाली कार्डको एक स्क्रीनशट वा फोटो।
द्रुत भुक्तानी क्यासिनो यसको खेलाडीहरु को प्रति वफादार नीति को अभ्यास, र विशेष गरी नयाँहरु लाई। क्यासिनो प्राय: खेल खाताको पहिलो निक्षेपको लागि बोनस प्रोग्रामहरू चलाउँछ।
पहिलो जम्मा बोनस १००% (१०० यूरो वा डलर + १०० मुक्त स्पिनहरू सम्म)। यो नयाँ खेलाडीहरूको लागि पदोन्नति हो जसले उनीहरूको सुरूवात बृद्धि गर्ने अवसर छन्। त्यहाँ केहि नियमहरू छन्:
पहिलो जम्मा २० अमेरिकी डलर/EUR, ०.००२ BTC, ०.०5 ETH, ०.०6B BCH, ०..4 LTC, 00 88०० DOGE;
बोनस कोड प्रयोग नगरी तपाईंको पहिलो जम्मा गर्नुहोस्;
बाजी बोनस रकमको x०x हो;
नगद बोनस जितेको रकमको कुनै सीमा छैन;
१०० नि: शुल्क स्पाइनहरू within दिन भित्र २० जनालाई जारी गरिन्छ।
क्यासिनोले प्रत्येक इच्छुक खेलाडीको लागि व्यक्तिगत वीआईपी-कार्यक्रम पनि प्रदान गर्दछ, सर्तहरू जुन"प्रोमो" सेक्सनमा वेबसाइटमा फेला पार्न सकिन्छ।
द्रुत भुक्तानी क्यासिनो धेरै भुक्तानी प्रणाली, पैसा मुद्रा र क्रिप्टो मुद्राको लागि खुला छ। त्यसो भए, तपाइँ तपाइँको खेल सन्तुलन पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ:
भिसा, मास्टरकार्ड र मास्ट्रो;
इलेक्ट्रोनिक वालेट WebMoney Ecopayz, Neteller, Skrill, Muchbetter, Mifinity, Rapid Transfer, EcoVoucher, Neosurf;
क्रिप्टोकरन्सीहरू: बिटकॉइन, बिटकॉइन नगद, Ethereum, litecoin, DOGEcoin, टिथर।
पैसा फिर्ता रकम माथिको १ 13 सेवाहरुमा उपलब्ध छ। निक्षेप सीमा १० देखि 000००० यूरो वा डलर सम्म, क्रिप्टोकरन्सी - अधिकतम रकममा सीमा छैन। फिर्ताहरू २० डलर/यूरोबाट उपलब्ध हुन्छन्, ०.०१ बिटकोइन, लिटेकॉइन वा ईथरबाट, डोजेकोइन एक हजार र टेथरबाट उपलब्ध हुन्छ - २० बाट।
लगभग सबै सेवाहरु बाट निकासी को लागी समय सीमा एक मिनेट देखि २ घण्टा सम्म को छ - समान अनलाइन क्यासिनो सेवाहरु बीच जीन कोष को यो सब भन्दा चाँडो र ग्यारेन्टी निकासी हो।